होटल बन्द नगर्ने निर्णय Bizshala -
कुन बैंकको आधारदर कति ? कुन बैंकबाट पाइन्छ सस्तैमा ऋण ? (तालिकासहित)
कोरोनाविरुद्वको खोप छिटो उपलब्ध गराइदिन संयुक्त राष्ट्रसंघसँग उपप्रधानमन्त्रीको आग्रह
हालसम्मकै सर्वाधिक ९१९६ मा कोरोना पुष्टि, ५० को मृत्यु
कोरोना कहर : ३ दिनको अन्तरालमा नेपालगन्जमा ३ दाजुभाइको मृत्यु
होटल बन्द नगर्ने निर्णय
काठमाण्डौ । कोभिड–१९ को सङ्क्रमणलाई फैलन नदिन सरकारले आजदेखि ‘लकडाउन’ गरेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द हुनेछन् भने सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका सबैखाले होटल पनि बन्द छन् ।
होटल एसोशिएशन अफ नेपाल (हान)ले होटल बन्द नगर्ने निर्णय गरेको छ । अत्यावश्यक सेवाभित्र होटल पनि पर्ने भएकाले निश्चित कर्मचारी राखेर सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिनुभयो । ‘‘होटललाई बन्द गर्न मिल्दैन’’, उपाध्यक्ष शाहले भन्नुभयो, ‘‘निश्चित कर्मचारी राखेर अन्यलाई सञ्चित बिदामा पठाउने सहमति भएको छ ।’’
आइतबार हानका अध्यक्ष सिर्जना राणाको अध्यक्षतामा सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय तीनवटै ट्रेड युनियनबीच भएको सहमतिमा होटलमा रहने कर्मचारीलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक मास्क, ज्वरो नाप्ने यन्त्र, स्यानिटाइजर र पञ्जा प्रबन्ध गरी काममा लगाउने भएको छ । सहमतिअनुसार हाललाई कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने सञ्चित बिदा तथा सञ्चित बिदा नभएमा अग्रिम बिदामार्फत समायोजन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोनाले परेको प्रभावबाट होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव तथा क्षतिको विषयमा हान र ट्रेड युनियनहरुको प्रतिनिधिसहितको संयुक्त प्रतिनिधिहरुले सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा होटल तथा होटलमा कार्यरत श्रमिकहरुको लागि आवश्यक पर्ने राहत र सुविधाको विषयमा संयुक्तरुपमा अनुरोध गर्ने सहमति भएको उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।
तारे होटलका अत्यावश्यक सेवा यथावत
कोभिड—१९ को सङ्क्रमणलाई फैलन नदिन सरकारले आजदेखि देशभर लकडाउन गरेको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द हुनेछन् भने सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्कन पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकभरका होटल क्षेत्र पनि बन्द छन् । राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका पर्यटकीय होटलदेखि तारे होटलले अत्यावश्यक सेवा दिइरहेका छन् ।
सरकारको निर्णय अनुरुप आजबाट लकडाउन भएपनि काठमाडौँका कतिपय तारे होटलले न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराइरहेको हानले जनाएको छ । होटलमा रहेका पाहुनालाई न्यूनतम कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा दिइरहेको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिनुभयो । “भएका पाहुनालाई व्यवस्थापन गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो, त्यो पुरा गरेका छौँ, अत्यावश्यक सेवाका पाहुना पर्यटकलाई विशेष अनुमति लिएर होटलसम्म आवतजावत गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अहिले विशेषगरी अन्तरराष्ट्रिय एयरलायन्सका कर्मचारीलगायत तारे होटलमा बसेका छन् । उनीहरु समान्य अवस्थामा पनि होटलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेकका केही पर्यटक मात्रै होटलमा छन् । हानका सदस्य होटलमा कमभन्दा कम जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । लकडाउनको अवज्ञा नहुने गरी होटलको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा रहेको हानले जनाएको छ ।
देश पूरै लकडाउन भएपछि स्वभाविक रुपमा होटल बन्द हुन्छन् । मानवीय भावले भएका पाहुनाको सेवा गर्नु कर्तव्य भएकाले आकस्मिक सेवा मात्रै सञ्चालन गरिएको उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ । यसअघि मुलुक लकडाउन नभएको अवस्थामा हानले अत्यावश्यक सेवाभित्र होटल पनि पर्ने भएकाले निश्चित कर्मचारी राखेर सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।
होटलमा रहने कर्मचारीलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक मास्क, ज्वरो नाप्ने यन्त्र, स्यानिटाइजर र पञ्जा प्रबन्ध गरी काममा लगाइएको हानले जनाएको छ । हानको केन्द्रमा ३५० र देशभरका १५ वटा क्षेत्रीय च्याप्टरमा आवद्ध गरी करिब तीन हजार पर्यटकस्तरीयदेखि पाँचतारे होटल छन् ।
जनरल इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा स्थगित
ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा काठमाण्डौ इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई रु. १ करोड सहयोग
डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रवर्द्धन गर्न सनराइज बैंक र सेलपेबीच सहकार्य
निषेधाज्ञाबीच कुन बीमा कम्पनीका सेयरधनीले कति कमाए, कति गुमाए ?
कोभिडमा करोडौँ मानिसले जागिर गुमाउँदा अमेरिकाका धनाढ्यहरूको सम्पत्ति झनै बढ्यो
सरकारले होटेल तथा रिसोर्टलाई संकेत चिह्न प्रदान गर्ने
काठमाण्डौ । सरकारले होटेल, रिसोर्ट तथा बुटिक होटलको पहिचान स्थापित...
चन्द्रागिरीको आइपीओमा आवेदनको बाढी
काठमाण्डौ । चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले दोस्रो चरणमा स�...
तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्सद्वारा नगद लाभांश प्रस्ताव, कति
काठमाण्डौ । तारागाउँ रिजेन्सी होटेल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका...
क्लब हिमालय नगरकोट उच्च स्वास्थ्य सुरक्षाका साथ पुनः
काठमाण्डौ । कोभिड १९ लकडाउनको कारण सेवा बन्द रहेको नगरकोटको...
काठमाण्डौका तीन पाँचतारे होटेल बिहीबारदेखि खुल्दै, यस्तो छ
काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले...
कोरोना कहर : धरापमा सुदूरपश्चिमका होटेल व्यवसाय, ४५ हजारको
- जीवन बिष्ट धनगढी । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसका कारण २० अर्ब लगानी...
साना होटलहरुद्वारा घरभाडामा ५०% छुटको माग, ऋण–ब्याज भुक्तानी
काठमाण्डौ। घरभाडामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थासहित १४ बुँदे माग...
न्यूनतम शुल्कमै होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउने सहमति, खर्च सबै
काठमाण्डौ । विश्वव्यापी महामारीका क्रममा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई...